USA kutumira - MediaLight Bias Lighting
Ese maodha anotakura kubva kuNew Jersey
Standard Shipping: (3-8 Mazuva) Yemahara kune chero kutenga
Kutumira Kutumira: (1-2 Mazuva) $4.00
UPS Inotevera Zuva Mhepo: (Manheru) Zvichienderana nehuremu hwekuyera uye kureba
Mamwe mareti uye sarudzo dzinoratidzwa zvichienderana neako kero yekutumira uye chinhambwe.
👉Kana kero yako iri PO kana APO / FPO kero, isu tinoshandisa yekutanga kirasi tsamba kunyangwe iyo nzira yekutakura yakaratidzirwa pakubuda. Chekutanga kirasi mapakeji pamwe anotakura pazuva rinotevera rebhizinesi sezvo isu tisisinayo yakarongwa zuva nezuva USPS piki (isu tinoshandisa FedEx ingangoita chete).
Yese nguva yekuendesa ndeyekutakura kwekufungidzira. Kana kutumira kwako kweusiku kana kwemazuva maviri kusasvika panguva yakatarwa, hatigone kudzosera kutumira kunze kwekunge isu tabhadharirwa mari kubva kune anotakura.